Ke ibuotikọ emi anyị na-aga na-achọ na ụfọdụ n'ime n'elu software na ngwa na-eji mgbe ị chọrọ unroot gị Samsung ngwaọrụ. Ma tupu esi na software na ngwa, ọ dị ezigbo mkpa na ị ndabere gị Samsung tupu Unrooting.
Ichekwa ndabere ngwaọrụ gị ga hụ na ị nwere oyiri nke gị niile data bụrụ na ihe ga-aga na-ezighị ezi n'oge unrooting usoro. Na ị ndabere ijide n'aka na-agụnye gị niile data gụnyere ngwa, kọntaktị, ozi, videos na photos.
Part 1. ndabere gị data tupu unrooting gị Samsung devicep
Nzọụkwụ otu: On gị Samsung ekwentị pịa Ntọala ma pịgharịa gaa na ala iji chọta Accounts na mmekọrịta. Enweta na a na mgbe ahụ enweta na "Tinye Akaụntụ. '
Nzọụkwụ abụọ: Họrọ Samsung akaụntụ. Ị ga-kpaliri ịbanye gị email na paswọọdụ ma ọ bụ mepụta a Samsung akaụntụ ma ọ bụrụ na ị nwere otu.
Nzọụkwụ atọ: Mgbe ahụ Enweta na Samsung Akaụntụ> Ngwaọrụ ndabere.
Nzọụkwụ anọ: Na obere ndabere window na-egosi, họrọ data ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara mgbe ahụ enweta OK.
Nzọụkwụ ise: The enweta na ndabere ugbu a na usoro ga-amalite. I nwekwara ike họrọ Nchekwa onwe-ndabere na-ekwe ka usoro iji wuchaa-akpaghị aka.
Mgbe i nwere gị ndabere ị nwere ike ugbu unroot gị Samsung. Ka-amalite site na-achọ na top unrooting software.
Key Akụkụ: Samsung Kies bụ ukara Samsung software na ya mere a ezi nhọrọ bụrụ na ị chọrọ unroot gị Samsung ngwaọrụ. E wezụga enyere gị aka unroot Samsung, ebe a bụ ole na ole ihe ndị ọzọ Samsung Kies nwere ike ime.
Kies-eme ngwaọrụ gị emelitere na ọhụrụ software mmelite
Ya-enye gị nyefee foto na vidiyo na gị PC
I nwekwara ike iji ya na-ndabere na weghachite ngwaọrụ gị
Mmepụta: XDA Developers
Key Akụkụ: SuperOneClick na-enye ohere ka onye ọrụ ma mgbọrọgwụ na unroot ha Samsung ngwaọrụ. Dị ka aha na-atụ aro, ọ dị mfe iji. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ na gam akporo ngwaọrụ bụghị nanị Samsung.
Mmepụta: Nnapụta Nkpọrọgwụ
Ahịa: Free n'ihi na ụfọdụ igwe $29.95 maka igwe na-ekwe nkwa mgbọrọgwụ nkwado
Key Akụkụ: a software-enye gị ohere mgbọrọgwụ na unroot niile Android ngwaọrụ. Ọ na-akwado niile Android ngwaọrụ iche site HTC. Ọ na-enye Nchekwa "unmount" atụmatụ na-enye ohere ọrụ nchekwa nke dịrị ha ngwaọrụ enweghị ihe ize ndụ nke rọrọ brik. The unrooting usoro dị nnọọ ngwa ngwa ihe dị mfe.
Top 3 Unroot égwu
Ọ bụrụ na ị ga-kama na-eji software, i nwere ike iji ngwa unroot gị Samsung ekwentị. Ka anya na atọ nke kasị bara uru unrooting ngwa ọdịnala dị.
Mmepụta: yinye Fire Ngwaọrụ
Key Akụkụ: Nke a ngwa bụ otu n'ime ndị kasị bara uru mgbe ọ na-abịa unrooting gị Samsung ngwaọrụ. Ozugbo ị ibudata ya, ọ ga-elele na ngwaọrụ gị iji hụ ndakọrịta tupu unrooting usoro nwere amalite. Ọ bụ ngwa ngwa na mfe iji. Ọ depụtara partitions na i nwere ike wee họrọ ka esere n'oge usoro.
Mmepụta: Usoro égwu
Key Akụkụ: Nke a na-eji ngwa-enye gị ohere unroot ekwentị gị nnọọ mfe. Ọ bụ dakọtara na kasị Android ngwaọrụ bụghị nanị Samsung. Ọ na-enyere gị na ndị ọzọ na software metụtara mbipụta dị ka huu gị software a na-emelite.
Key Akụkụ: Ginger unroot completes unrooting usoro enweghị ihe ọ bụla data ọnwụ gị. Ọ gaghị ehichapụkwa ekwentị gị nke ya data. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na dị nnọọ mfe ka unroot a ekwentị. Ị nwere ike re-kwụsịrị ekwentị gị mgbe e mesịrị bụrụ na ị chọrọ.
> Resource> Samsung> Samsung Unroot Software na égwu